Murairi omelette mapikicha: chiJapanese dhizaini, ine chizi, yakabikwa uye nezvimwe! | Kicheni Mapepa
Susana godoy | | Mapinda Anopisa, General, Special Recipes, Nyore Mapepa
Wakamboedza rice omelette here? Kune akawanda marudzi etortilla, mbatatisi, miriwo, tuna, ham uye chizi etc.
Asi nhasi ndinokuunzira imwe yakasarudzika, mupfumi omelette omelette. Hongu, paunenge uchiverenga, Rice omelette uye ndinokuvimbisa kuti inonaka.
Kekutanga nguva pandakaona iyi omelette yemupunga, yaive mubhuku rezvekubikisa uye ndakafunga kuyedza kubva mukuda kuziva, ikozvino ndiyo imwe yenzira dzandinofarira kudya mupunga zvakanyanya.
Kekutanga pandakaiona, yaive mubhuku rezvekubikisa uye ndakafunga kuyedza kubva mukuda kuziva, ikozvino ndizvo imwe yenzira dzandinofarira zvikuru kudya mupunga. Izvo zvinoshandiswa zvine musoro uye nguva yacho ingori yekudya zvakanaka.
Recipe mhando: Mupunga
Iyo kujekesa kuri nyore, zvakaringana tinofanira kubika mupunga, sezvatinoita nguva dzose. Mumvura iri kufashaira, munyu uye madonhwe mashoma emafuta, ndiwo maitiro andinogadzira, dzimwe nguva ndinowedzera clove yegariki. Kana tava nemupunga wakabikwa, tinoudhonza nekuuchengeta.
Isu tinoisa pani ine mafuta mashoma ekupisa, patinenge tichirova mazai akati wandei (ini ndinogadzira iwo wega ometi omupunga). Kana tave nemazai tinowedzera munyu wemunyu uye mhiripiri shoma mumupunga. Tinozvisanganisa zvese. Kana isu tine pani inopisa, tinogona dururira musanganiswa mupani kuitira kuti omelette iitwe.
Tinorega rakasvibira pamativi ese, tichichishandura kana rabata uye tinogona kuribvisa kana taona kuti rakagadzirira.
Zvine musoro, imwe neimwe ine poindi yekubikira matortilla, angave aitwa nemazvo, nezai kusvika padanho, nezvimwe. Iwe unogona kutevedzera zvakafanana nzira yeiyo rice omelette. Ini ndinogona kungokushuwira rombo rakanaka uye nekutaura zvaunogona wedzera hanyanisi kana kunyatso bata chorizo.
Uye kana uine mupunga wakasara, usazeze kutora mukana wawo kugadzira makeke emupunga, iri nyore nyore nzira inonaka.
1 ChiJapanese rice omelette
1.1 Zvinongedzo zvevanhu vaviri
2 Rice uye chizi omelette
3 Unogona here kushandisa mupunga wakasviba?
4 Nzira yekugadzira yakabikwa mupunga omelette
4.1 Zvinongedzo zvevanhu vana
ChiJapanese rice omelette
Iko kusanganiswa kwezvatinoziva se omelette uye mupunga wakakangwa, unotisiya isu yakapusa, inokurumidza uye yakasarudzika dhishi. Munzvimbo dzeKorea pamwe neTaiwan zvakajairika kuti uzviwane. Zvakare kutaura, tinogona kuzvitsanangura semupunga unogadzirwa nehuku kana miriwo uye wakaputirwa netaundi yeFrance omelette. Izvo hazviite senge zano rakanaka kwauri here?
Zvinongedzo zvevanhu vaviri
1 girazi remupunga
2 magirazi emvura
150 gramu yechipfuva chehuku
Pepuru tsvuku uye girini
Kutanga tinobika sadza nemvura uye nemunyu. Kune rimwe divi, tiri kuzocheka zamu rehuku chaizvo. Tichaita zvimwe chete nemhiripiri nehanyanisi. Tichaisa pani yekutsvaira pamoto nepuniki yemafuta uye svibisa zvakapfuura zvigadzirwa. Kana mupunga wabikwa, tinoiwedzera mupani. Tichasiya maminetsi mashoma apo isu tichimhanyisa kuitira kuti zvinonaka zvisanganise. Isu tinowedzera muto wedomasi. Mune imwe pani, isu ticha iwo maFrance omelette. Achave maviri kana maviri mazai rimwe nerimwe. Kana dzave kuda kugadzirira, wedzera musanganiswa wemupunga uye padyo kuti unamate zvakanyanya. Iwe unogona kushongedza kumusoro nechimwe chidimbu chemadomasi muto uye wagadzirira kuravira.
Rice uye chizi omelette
Kana paine mupunga wakasara, uyo unove nechokwadi kuti wakajairika, hapana chakafanana nekuuchengeta kuti ugone kugadzira iyo yekubheka inonaka seiyi. Mune ino kesi isu takasarudza mupunga uye chizi omelette. Mubatanidzwa wakasarudzika wausingakwanise kupotsa.
Ndiro yemupunga wakabikwa
3 mazai ari pakati
3-4 zvidimbu zve mozzarella chizi
4 mashupuni e grated cheese
Kutanga iwe unofanirwa kusanganisa mupunga nemazai, kusvikira wanyatsobatanidzwa. Tinoisa pani pamoto nepuniki yemafuta. Mariri tichawedzera hafu yemusanganiswa uye isu ticharega zviitwe kwemaminetsi mashoma. Kunyange, Tichawedzera echizi zvimedu uye zvakare akagadzirwa kana iyo yawakasarudzira chiitiko. Ino ndiyo nguva yekuvhara zvese chizi nechimwe chikamu chemusanganiswa. Kunge chero tortilla, inoda isu kuti tiibudise uye isu tosiira iyo kwemaviri kana matatu mamwe maminetsi.
Unogona here kushandisa mupunga wakasviba?
Kuti ugadzire aya marudzi eeresipi uko mupunga omelette ndiyo pfungwa huru, unogona kushandisa chero mhando yechigadzirwa ichi. Ndokunge, mupunga muchena nemupunga wakasviba, zviyo refu uye kunyange zvinonhuwirira. Dzese dzichava dzakabatanidzwa zvakakwana paunenge uchigadzira ndiro senge iyi. Ehezve, mune iyo kesi ye brown mupunga tinogona kuva ne yakawanda ine hutano dhishi, ine fiber yakawanda uye mavitamini. Uye zvakare, mazai anowedzera mapuroteni uye sekunge izvo zvaive zvisina kukwana, tinogona kugara tichiwedzera mimwe miriwo.
Nzira yekugadzira yakabikwa mupunga omelette
Kana iwe uchifanirwa kugadzirira imwe yakati siyanei dhishi, wobva wasarudza iyi yakabikwa mupunga omelette. Hongu, nekuti isu tinogona zvakare kushandisa ovhoni kugadzira yakapusa uye yakasarudzika dhishi sezvizvi. Nyora pasi sei!
Zvinongedzo zvevanhu vana
400 gr yemupunga wakabikwa
200 gr yemhiripiri
300 gr yemadomasi
100 gr yechizi
Supuni 1 yemafuta
Munyu uye oregano
Chekutanga pane zvese, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti iwe unogona kugara uchichinja mhiripiri kana madomasi kune shoma tuna kana chimwe chinongedzo chaunofarira zvakanyanya. Izvo zvakati, tinopisa huni kusvika 170º. Tinocheka madomasi ese, mhiripiri nehanyanisi. Tinovaisa mugango rine mafuta mashoma kwazvo. Tinovasiya kwemaminetsi mashoma uye tinobvisa kusanganisa nemupunga unenge watobikwa kare. Kumusanganiswa uyu tinowedzera munyu wemunyu, zvinonhuwira zvakadai se oregano nemazai akarohwa. Kana zvese zvanyatsosanganiswa isu tichafanira dururira mundiro yekubikira, yaimbozorwa mafuta mashoma. Tichairega ichibika kwemaminitsi makumi maviri nemashanu. Asi chenjera, ovhoni yega yega yakasiyana, saka uchafanirwa kutarisa kuti chikamu chepamusoro chakasimba kuti uzive kuti zvaitwa. Kana tangoibvisa kubva kukudzwa, tinoisa chizi pairi. Chinhu chakanakisa mune ino kesi ndechekuti zvidimbu, asi iwe unogona zvakare kuwedzera zvishoma grated chizi. Chete nekupisa kunopihwa nemupunga tortilla ndipo panogona kunyungudika chizi. Kana kuchidziya zvishoma, tinogona kuzvimba zino.
Sezvauri kuona, mupunga omelette idhishi rakazara kwazvo. Kune rimwe divi, ndicho chinhu chiri nyore kuita. Chinhu chinokwezva kune vese vakuru nevana mumba. Kune rimwe divi, izvo zvakakosha kuti ugone tora mukana wechikafu kunge mupunga watasara nawo. Tora mukana!.
Yakazara nzira kuchinyorwa: kudzidziswa » Shamwari » Mapinda Anopisa » Mupunga Omelette
Daniela dal farra akadaro
Izvo zvinogona zvakare kuitwa ne pasta. Ini ndinogadzira pasita omelette kana ndine chimwe chinhu chasara mushure mekudya kwemasikati, saka handirasikirwe nacho!
Pindura Daniela Dal Farra
rocio rock akadaro
chakanaka hachiwanzoitika asi ini ndichachiedza zvakare ndinoda yekubika yekubika
Pindura kudombo redio
Ino inguva yekutanga kuti ndichazviita, ipapo ini ndinokuudza kana
Ndatenda nekuverenga uye kana iwe ukaigadzirira, isu takamirira maonero ako
Ndatenda! Ndakazviita nhasi and it was great 😀 kukwazisa
Ini ndangoigadzira ... Asi ini ndakagadzirisa zvimwe zvinoshandiswa ... Rikisiiiimooo ndaizvida uye vaenzi vangu vaisakwanisa kufara ..
Vakaratidzika zvakanaka pandiri jaajajajajajjajajajajajjajaaj …………………………………. 😀
Ini ndinogara ndakanaka ndine zvishoma yevakakwana gehena ...
Pindura kuna paula
Uye unoziva akadaro
Ndiri kungoigadzirira, asi inotaridzika zvakanaka. : v
Pindura kuna Ya unoziva
Izvo chete zvandaitsvaga, ndaisaziva kuti ndogadzira sei omelette yemupunga, nhasi ndazvigadzira ndozokuudza nezvazvo. Kutenda kwazvo!!!
Ini ndangogadzira imwe, wedzera parsley nechizi, zviedze
Pindura kuna lilian
Ndakadya sadza omelette kubva ndichiri mudiki.Amai vangu vanogadzira mupunga nezvidimbu zvekarotsi nyama, dzimwe nguva mapea ... unogona zvakare kuwedzera mashoma mashizha eparsley yekubata kune musanganiswa nezai ... zvinonaka ...
Zvakanakisa mikana yekugadzira mupunga tortilla
luis gonzalo valverde akadaro
Ndatenda zvikuru nekutipa imwe imwezve nzira yekutora mukana wemupunga. Ndinotora mukana uno kukukwazisai uye ndinokushuvirai gore rakanaka idzva. maererano
Pindura kuna luis gonzalo valverde
Elida Esther akadaro
Vakandibatsira zvakanyanya sezvo ndakabika mupunga wakasviba uye ndanga ndisingazive zvekuita kwezviuru zvemaawa.
Pindura Elida Esther
Yakabikwa Nguruve Kurega